Libhandy raibhurari yekugadzira nharembozha dzeGTK neGnome kunyorera | Kubva kuLinux
Libhandy raibhurari yekugadzira nharembozha dzeGTK neGnome kunyorera
Darkcrizt | | Applications, Chigadzirwa
Purism, painenge ichigadzira iyo Librem smartphone 5 uye yemahara PureOS kugovera, yakapa kuburitswa kweibhandy raibhurari 0.0.10, iri kuvandudza seti yemawadhi uye zvinhu zvekugadzira mushandisi yekushandisa nharembozha uchishandisa GTK neGnome matekinoroji.
Raibhurari iri kuvandudzwa mukutora kwekushandisa kweGnome kunzvimbo yemushandisi yefoni yeLibrem 5. Iyo kodhi yeprojekti inogoverwa pasi peGPL 2.1+ rezinesi. Pamusoro pekutsigira mafomu muC mutauro, raibhurari inogona kushandiswa kugadzira nharembozha dzemashandisirwo emashandisirwo muPython, Rust, uye Vala.
Iye zvino, raibhurari inosanganisira makumi maviri neshanu majeti anofukidza akasiyana akajairwa maficha eiyo interface, senge rondedzero, mapaneru, edhi mabhuroko, mabhatani, tabo, mafomu ekutsvaga, mabhokisi ebhokisi, nezvimwe.
Iwo akajekeswa majeti bvumira kuumba nzvimbo dzekunze dzinoshanda zvine hunyanzvi pane ese mahombe PC uye laptop skrini, sekudiki zvidiki zvekubata emafoni. Iyo yekushandisa interface inoshanduka zvine simba zvichienderana nesaizi size uye zviripo zvekushandisa zvekushandisa.
Chinangwa chakakosha cheprojekti ndechekupa mikana yekushanda pamwe chete neGnome kunyorera pane mafoni uye makomputa.
Iyo software yeLibrem 5 inoenderana nekuparadzirwa kwePureOS, ichishandisa seDebian yepasi, iyo Gnome desktop nharaunda neShell yayo, yakashandisirwa mafoni.
Kushandisa libhandy inobvumira kubatanidza smartphone kune iyo yekutora kuti uwane Gnome desktop zvakajairika zvichibva pane imwechete seti yekushandisa.
Zvikumbiro zvakashandurwa ku libhandy zvinosanganisira: ese maGnome maapplication senge gnome-bluetooth, Gnome marongero, webhu browser, Phosh (Dialer), Daty, PasswordSafe, Unifydmin, Fractal, Podcasts, Gnome Kutaurirana, uye Gnome mitambo.
Chii chinopihwa naLibhandy 0.0.10?
Libhandy 0.0.10 ndiyo yazvino vhezheni yekutarisa isati yaumbwa yechinhu chakakosha vhezheni 1.0.
Iyo nyowani vhezheni inounza akati wandei matsva majeti:
HDyViewSwitcher chinogadziriswa chinotsiviwa cheGtkStackSwitcher widget iyo inobvumidza kuti iite otomatiki dhizaini yetabhu (maonero) zvichienderana nehupamhi hwechidzitiro.
Pane makuru masikirini, maikoni nemisoro inoiswa mumutsetse mumwe, nepo zvidiki zvidiki zvinoshandisa macompact dhizaini, mune iwo musoro unoratidzwa pazasi pechiratidzo. Kune nhare mbozha, bhatani bhatani rinoenda pasi.
HdySqueezer: mudziyo wekuratidzira iwo mapaneru, uchifunga nezve saizi iripo, kana zvichidikanwa kuti ubvise ruzivo (rwe panoramic skrini, bha racho rese remusoro rinodedera kuti uchinje matabhu, uye kana pasina nzvimbo yakakwana, widget inoratidzwa iyo inofanidza zita uye iyo switch switch inoenda kuzasi kwechidzitiro).
HdyHeaderBar: kumisikidzwa kwepaneru yakawedzerwa, yakafanana neGtkHeaderBar, asi yakagadzirirwa kushandiswa mune inoenderana interface, inogara iri pakati uye ichizadza zvizere nzvimbo yemusoro pakukwirira.
HdyPreferencesWindow: iyo adaptive vhezheni yehwindo yekumisikidza parameter pamwe nekukamurwa kwekugadziriswa mumatebhu nemapoka.
Ye yekuvandudza ine chekuita nekugadzirisa Gnome kunyorera kwekushandisa pane smartphone, zvinoonekwa:
Iyo PulseAudio loopback module inoshandiswa pane iyo interface kugamuchira uye kufona kubatanidza modem yemuchina uye odhiyo codec ku ALSA kana kufona kwaitwa uye module yacho inotorwa mushure mekufona kwapera.
Iyo nhume ine interface yekutarisa nhoroondo yekutaura. Kuchengeta iyo nhoroondo inosanganisirwa SQLite DBMS.
Wakawedzera kugona kuongorora iyo account, iyo zvino yasimbiswa kuburikidza nekubatana kune server, uye kana zvikakundikana, yambiro inoratidzwa.
Iyo XMPP mutengi inotsigira yakavharidzirwa mameseji nekushandisa iyo Lurch plug-in pamwe nekumisikidza kweOEMEMO terminal encryption mashini.
Chiratidzo chakakosha chakawedzerwa kune iyo pani inoratidza kuti kunyorera kunoshandiswa mune yazvino chat kana kwete. Zvakare kuwedzerwa iko kugona kuona izvo zvitupa mapikicha eimwe kana imwe nhengo yenhengo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Libhandy raibhurari yekugadzira nharembozha dzeGTK neGnome kunyorera
Crypto Assets uye Cryptocurrencies: Chii chatinofanira kuziva tisati tavashandisa?
Mutauro weV programming wakaburitswa mu open source